प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ र राष्ट्रपतिको ‘हिहि’को यथार्थ – Nepal Japan
प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ र राष्ट्रपतिको ‘हिहि’को यथार्थ
संविधानमा व्यवस्था भएको छनौटको प्रावधान अनुसार त्यसो गरेका
डिकेन्द्र ढकाल २ जेष्ठ ०१:१७
वैशाख ३१ गते शुक्रबार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिज्ञा गर्दछु शब्द उच्चारण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रोकिएपछि राष्ट्रपतिले पुनः दोहोर्याउनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली यो त्यो पर्दैन भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारी मुसुक्क हाँदै हिहिहि गर्नुभयो ।
यो विषयले सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमहरुमा निकै चर्चा पायो र आलोचनाको वर्षा नै भयो । तर यसको वास्तविकता के हो ? किन देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्न आवश्यक ठान्नुभएन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ? वास्तवमा यथार्थ के हो ?
विश्लेषक तथा चिन्तक एवं डिकेन्द्र ढकालले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्लेषण र तथ्य यस्तो छ-
सामाजिक संजालमा “त्यो पर्दैन” बारे भएको बाक्लै चर्चा बारेमा:
वलीले”त्यो” पदावली आफूले भन्न नपर्ने भएकोले राष्ट्रपतिले दोहो-याउँदा “त्यो पर्दैन” भने । उनले संविधानमा व्यवस्था भएको छनौटको प्रावधान अनुसार त्यसो गरेका हुन् । संविधानमा त्यो छनौटको व्यवस्था छ भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो “विश्वास” अनुसार छान्नु अनौठो कुरो नै भएन । बरु अनौठो त उनले ईश्वरको नाममा सपथ लिएको भए हुन्थ्यो किनभने स्पष्टै छ, कम्निष्टहरु ईश्वरमा आस्था राख्दैनन्। कतिपयले भन्लान्, वली कम्निष्ट नै होइनन् । यो अरुले भन्ने कुरो होइन । उनले आफूलाई कम्निष्ट भन्छन्, उनको दलले उनलाई कम्निष्ट भनेर सदस्यता दिएको छ र निर्वाचन आयोगले पनि कम्निष्ट दलकै सदस्य ठान्दछ भने अरुले होइन भनेर केही हुने होइन, भनिराखे जिब्रो टट्टाउने मात्र हो ।
हिहीही: राष्ट्रपतिले सुरुमा हातमा पारिएको कागजमा सोझै जे छ त्यही पढिन्, वलीले त्यो पदावली नभनेपछि उनको आसय राष्ट्रपतिले बुझिनन् र दोहो-याइन् । वलीलाई लाग्यो, उनी चुप लागेर बसे राष्ट्रपतिले त्यही पदावली फेरि दोहो-याउँछिन् ! यसरी त सपथ अगाडि बढ्दैन । त्यसैले चलाख वलीले बोलेरै संकेत गरे अघि बढ्न । बल्ल यति बेला एउटा कम्निस्टको कुरा अर्को कम्निस्तले बुझ्दा स्वभाविक हिसाबले “हिहीही” आइहाल्यो ! आयो त ! क्यारून् त उनले पनि! हो, यहाँ भने कमजोरी भएको हो । कमजोरी राष्ट्रपतिको होइन । यस्ता औपचारिक कार्यक्रम बनाउने “भित्रिया”हरुले एउटा कम्निष्ट प्रधानमन्त्रीले सपथ खाँदा सपथको प्रावधान हेरेर, अड्कल काटेर वा सपथ खाने व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर राष्ट्रपतिलाई तयारी गराएको हुनुपर्थ्यो । अर्को तिरकाले पनि यो तयारी गरेको भए हुन्थ्यो । यो दुबैतिरका भित्रियाहरुको गैरजिम्मेवार काम हो ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, त्यसो हो भने उनीहरुकै अयोध्या, पशुपति आदि के हो त ? यसबारे सबैले बुझ नपचाउने हो भने सबैलाई थाहै छ, त्यो “नाटक” हो । राजनीतिमा भोटका लागि यस्तो हुन्छ। भ्रम दिन सक्नु राजनीतिमा खुबी नै मान्नुपर्छ । भोट गन्ने बेलामा बदर हुने गरी छाप लागेको छैन भने आस्तिकले हालेको पनि भोट गनिन्छ।
त्यसैले कम्युनिष्टहरु जसले मार्क्स, लेनिन र माओलाई आदर्श मान्दछन् उनीहरुको दर्शन अनुसार नै यस प्रकारको नास्तिक विश्वास पछ्याइएको हुनाले यो समाचार र चर्चाको विषय बन्ने कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु यो सिद्धान्त अनुसारको कार्य हो र आलोचनाको विषय नै होइन । (कम्युनिस्टले गैरकम्युनिस्टलाई र गैरकम्युनिस्टले कम्युनिस्टको आलोचना गर्नु बेग्लै कुरो हो ।)कम्युनिज्म र धर्मबारे बढी सुनिएको एउटा कथन छ कार्ल मार्क्सको, “धर्म भनेको अफिम हो ।” त्यस्तै माओको कथन छ, “धर्म भनेको विष हो ।” यसरी पूर्वीय र पश्चिमी दुबै दर्शनमा आस्तिकवाद र नास्तिकवादका अनुयायी पाइन्छन् । नास्तिक हुन कम्युनिस्ट नै बन्न आवश्यक पनि छैन । फेरि कम्युनिज्म आफैमा अर्को “धर्म” हो किनभने धर्म भनेकै आखिर आस्था नै हो । बरु एकैपटक उही व्यक्ति ईश्वरलाई स्विकार्ने आस्तिक हुनु र कम्युनिस्ट हुनुमा -यांगठ्यांग मिल्दैन कि किनभने कम्युनिस्ट हुनु भनेको भौतिकवादी दर्शनलाई मान्नु हो ।
ईश्वरको अस्तित्व स्विकार्ने धर्मबारे कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारका केही कथनहरु:
१.कम्युनिजम (साम्यवाद) त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट नास्तिकवाद सुरु हुन्छ । – मार्क्स । श्रोत: Communism and the Conscience of the West ( 1948)
२.हामीलाई ईश्वरमाथि विश्वास छैन । सम्पूर्ण ईश्वरीय आराधनाहरु भनेको मरेको शरीरमाथि यौनक्रिडा गर्नु हो । – लेनिन । श्रोत: James Thrower, God’s Commissar(1992)
३.कुनै पनि धार्मिक विचार, कुनै पनि देवताको विचार र देवतासँगको प्रेम पनि अवर्णनीय दुर्गन्ध हो, सबैभन्दा ख़तरनाक दुर्गन्ध, सबैभन्दा निन्दनीय स्पर्शरोग अर्थात् रोगसंक्रमण हो । – लेनिन श्रोत: Arnold Beichman ( 2000)
फेरि यस प्रकारका कथन कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारहरुले उल्लेख गर्नु अगि पूर्वीय दर्शनमा नास्तिक विद्वान चार्वाकले पनि चर्चा गरेका थिए । चार्वाकका अनुसार ईश्वरीय शक्तिको अस्तित्व छैन । शासक (उनकै शब्दमा राजा) नै अन्तिम शक्ति हो । अर्थात् चार्वाकका मतमा शासक भनेको यस लोकको स्वामी हो । उसको नियम सबैले मान्नु पर्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष ईश्वर भनेको त्यही शासक हो । किनभने उसले असल र खराबको निर्णय गरी दण्ड र पुरस्कार दिन्छ । त्यसैले नास्तिक भनेका कम्निस्ट मात्रै हुन्छन् भन्नु पनि छैन । कम्निस्ट नबनिकन पनि नास्तिक बन्न सकिन्छ । बिपी कोइरालालाई अध्ययन गर्दा उनी ईश्वरप्रति आस्थावान वा धार्मिक लाग्दैनन् । हो, आध्यात्मिक भने लाग्दछन् । धार्मिक हुनु र आध्यात्मिक हुनु फरक कुरो हो ।